Хятад Шилэн лазераар гагнасан дэрний хавтангийн дулаан солилцогч үйлдвэр ба үйлдвэрлэгчид | Chemequip
Film Chiller လဲကျ
ချိုသောညှပ် - အပေါ်အင်္ကျီ
Шилэн лазераар гагнасан дэрний хавтангийн дулаан солилцогч
Захиалгаар хийсэн Falling Film Chiller
Өндөр үр дүнтэй дүрэх дэрний хавтан дулаан солилцогч
Лазераар гагнасан сав
Дэрэн ялтсуудыг ууршуулагчтай плитаны мөсөн машин
Мөсөн банкны мөсөн ус хадгалах систем
Эрчим хүчний хэмнэлттэй, үр ашигтай зутан мөсний машин
ခေါင်းအုံးပြားအပူလွှဲပြောင်းမျက်နှာပြင်သည်မတူညီသောပုံစံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည့် panel-type heat exchanger ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောဖိအားများနှင့်အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းများပါဝင်သော application များအတွက်သင့်တော်သည်။
ခေါင်းအုံးပြား Heat Exchanger သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းစွမ်းအားကိုပေးသည်။ ဖိုင်ဘာလေဆာ - ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်မြင့်တက်နေသည့်လိုင်းများကြောင့်အပူလွှဲပြောင်းမြှောက်ဖော်ကိန်းများရရှိရန်အတွက်အရည်ပြင်းထန်သောလှိုင်းလေထန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း: T / T
Single Embossed Pillow Plates usually work asaClamp-on Jacket for vessel or tank wall surface heat exchange or directly used for coolant plate contact with product.Two sheets thickness are different.
Double Embossed Pillow Plates usually work as the evaporators for falling film chiller, plate ice machine, plate bank, or immersion plate heat exchanger, etc.
The two sheets thickness are the same.
Falling Film Chiller with Pillow Plates Evaporators ☝
Stainless Steel Sheets ☝
Two Sheets are Laser Welded Together ☝
The next two step inflating and pickle passivation. ☝
(2) ခေါင်းအုံးပြားကျဆင်းနေရုပ်ရှင် Chiller
(၃) Dimple Tank
(၄) Plate Ice Machine
(၆) နှစ်မြှုပ်ခြင်း Plat Heat Exchanger
(9) Flue ဓာတ်ငွေ့အပူလဲလှယ်
၁ ၂။ ရေ
၅ ၆။ Glycol Solution
(2) သံမဏိ SS304, 316L, 2205 Hastelloy titanium နှင့်အခြားပစ္စည်းများကဲ့သို့သောပစ္စည်းများအများစုတွင်ရနိုင်သည်
(4) အများဆုံးပြည်တွင်းဖိအားအောက်မှာ 60 ဘားဖြစ်ပါတယ်
Our production advantage for pillow plates
ခေါင်းအုံးပြား heat exchanger
နောက်တစ်ခု: Plate Crystallizer
ကျဆင်းသွားရုပ်ရှင် chiller များအတွက်ချိုပန်းကန်
နှစ် ဦး ဖောင်းကြွခေါင်းအုံးပန်းကန်အပူလဲလှယ်
မြင့်မားသော - ထိရောက်မှုပန်းကန်အပူလဲလှယ်
လေဆာဖြင့်ပြုလုပ်သော platecoil heat exchanger
လေဆာအပူချိန်ပန်းကန်အပူ exchanger လေဆာ
ပြုတ်ကျရုပ်ရှင် chiller များအတွက်ခေါင်းအုံးပန်းကန်
စက်မှု slurry ရေခဲစက်, စီးပွားဖြစ် slurry ရေခဲစက်, ဓာတ်ပေါင်းဖိုများအတွက်နှစ်မြှုပ်ခြင်းအပူလဲလှယ်, အရည်ရေခဲစက်, သံမဏိချိုဂျာကင်အင်္ကျီ , ချိုပန်းကန်အပူ exchanger၊